​कालो हरिण मारेको आरोपमा सलमान खानविरुद्ध आज फैसला सुनाइँदै, जेल सजाय हुन सक्ने
Mon, Jul 23, 2018 | 19:42:04 NST
11:21 AM (4months ago )
चैत २२ – जोधपुरको एउटा अदालतले कालो हरिणको शिकार गरेको आरोपमा दुई दशकपछि अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेन्दे्र, तब्बू तथा नीलिमा कोठारीविरुद्ध बिहीबार आफ्नो फैसला सुनाउँदैछ ।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवकुमार खत्रीले सन् १९९८को यो मुद्धाका बारेमा २८ मार्चमा पूरा सुनुवाई गर्दै फैसला पछि सुनाउने घोषणा गरेका थिए । फैसला सुनाउने क्रममा आरोपी सबै कलाकार अदालतमा उपस्थित रहनेछन् ।
केही बेरमा अदालतले फैसला सुनाउने बताएको छ । अदालत परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । सलमान खान मुम्बई विमानस्थलबाट चार्टड विमानमा बहिनीहरु अलविरा अग्निहोत्री र अर्पिता खान शर्माको साथमा जोधपुर पुगिसकेका छन् । आरोपी अन्य कलाकार पनि जोधपुर पुगिसकेका छन् ।
यस्तो भएमा जेल बस्नुपर्छ सलमानले
यस मुद्धाका जानकारहरु बताउँछन् यदि सलमान खानलाई ३ वर्षको जेल सजाय सुनाइएमा उनलाई त्यति नै बेला बेल प्राप्त हुनेछ , यदि उनलाई ५ वर्षको जेल सजाय भएमा उनले कम से कम एक दिन जेलमा बिताउनुपर्नेछ । एक दिनपछि शनिबार र आइतबार भएकाले उनले तीन दिन जेलमा बस्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।
यो घटना चलचित्र ‘हम साथ साथ हे’ को सुटिङको दौरानमा घटेको थियो । सन् १९९८ मा राजश्री फिल्मको ब्यानरमा बनेको यस चलचित्रको सुटिङको समयमा सलमान खानले कालो हरिण मारेको आरोप लागेको छ । साथै सलमानलाई उक्साउन सहयोग गरेको आरोपमा सैफ अली खानसहितका अन्य कलाकारको नाम पनि समावेश छ ।
सलमान खानलाई वन्यजन्तु संरक्षण कानुनको धारा ५१ त्था अन्य कलाकारलाई वन्यजन्तु संरक्षण कानुनको धारा ५१ त्था भारतीय दण्ड सहिंताको धारा १ सय ४२ अन्तरगत मुद्धा चलाइएको छ ।
के भन्छन् सरकारी वकिल ?
सरकारी वकिल भवानीसिंह भाटीका अनुसार त्यो रात सबै कलाकार जीपमा सवार थिए । जीप सलमानले चलाइरहेका थिए । हरिणको बथान देख्नेबित्तिकै सलमानले बन्दुक चलाएर दुइटा हरिण मारे ।
सरकारी वकिलका अनुसार जब गाउँका स्थानीयले कलाकारले हरिणमाथि गोली चलाएको देखे, उनीहरु मृत हरिणलाई त्यहीँ छोडे भागे । भाटीले कलाकारविरुद्ध आफूहरुसँग पर्याप्त प्रमाण रहेको बताए ।
सलमानका वकिल के भन्छन् त ?
यी आरोपलाई खण्डन गर्दै सलमानका वकिल एचएम सारस्वतले अभियोजन पक्षको प्रमाणमा बनावटीपन रहेको बताए। सारस्वतले अभियोजन पक्ष हिरण बन्दुककै गोलीबाट मारिएका थिए भन्ने प्रमाण पेश गर्न पनि विफल भएको बताए । यस्तोमा उनीहरुको जाँचको भरोसा गर्न नसकिने उनले बताए ।